Allgedo.com » 2012 » December » 04
Home » Archive Daily December 4th, 2012
Drs Fowziyo Yuusuf “Waxaa balan ah inaan soo celino Safaaradihii Soomaaliya ee caalamka”
Wasaarada Arimaha Dibada Soomaaliya waxaa marki ugu horeysay qabatay Gabar Soomaaliyeed, waxaana xilkan loo dhiibay Marwo Fowziyo Yuusuf Xaaji Aadan. Wasiirada Arimaha Dibada ayaa hada Bilowday shaqooyin aad u badan, kuwaasoo aysan qaban Wasiiradii kaga horeyay Kursiga, inkastoo Ragi kaga horeeyay la leeyahay waxa ay wasiiro ka ahaayeen Dowlad aan awood u lahayn inay Hantideeda soo cxeshoato. Marwo...
Safaarada Soomaaliya ee Roma ma guri uu Nuur Cade leeyahaybaa, mise waa hanti qaran? (Daawo 2 Video)
ALLE ayaa mahad leh, Nabad galyo iyo naxariis korkiisa ha ahaayto Nabigeenii suubanaa Muxamed (SCW). Dhamaan umad Soomaaliyeed ee walaalahaay ah waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka Assalamualaikum Wr Wb. Wayahaanba qoraalo ma soo daabicin mana waayin wax aan qoro ee wakhtigaa ii saamixi waayey. Ma jeceyli in aan ku mashquulo shaqsi iyo kooxo midna balse waxaan jeceylahay in aan shacabka Soomaaliyeed...
DHAGAYSO: Ra’isul Wasaare Dr Saacid oo amaanay maamulka Kismaayo
Iyadoo maalmahaan dambe Ciidamada Sirdoonka Kismaayo ay aad u Shaqeynayeen oo ay qaraxyo Fashiliyeen, ayaa markii ugu horeysay waxaa ka hadlay Ra’iisul wasaaraha soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon. Dr Saacid waxaa uu maamulka iyo Ciidamada ku sugan magaalada Kismaayo ugu hambalyeeyay horumarka dhinaca amaanka ay ka sameeyeen Bacdamaa Shalay iyo Maanta laba qarax oo kala duwan ay ka hortageen. Shalay...
Wafdi uu hogaminayo Madaxweyne Xasan Sh oo uduulay dalka Turkiga
Madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gordhaweyd ka duulay garoonka diyaaradaha ee Magaalada Muqdisho. Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa waxaa la socday wasiirka arimaha dibada,Wasiirka Gaashaandhiga,Wasiirka maaliyada Xukuumadda Soomaaliya. Kahor inta aysan ka bixin garoonka diyaaradaha ee Magaalada Muqdisho ayaa waxaa saxaafada garoonka Muqdisho kula hadlay...
Taliye Ciidan oo ku dhaawacmay Muqdisho iyo Booliska oo kahadlay
Waxaa manta magaalada Muqdisho ku dhaawacmay Taliyihii ciidamada Taraafikada wadooyinka ee dowlada, iyadoona haatan lagu daaweynayo isbitaal kuyaal magaalada. Askari katirsan ciidamada dowlada ayaa lasoo sheegayaa in rasaas ay kaga fakatay Taliyahan oo lagu magacaabayay Cali Gaab. Arinyas ayaa waxaa kahadlay Taliska Ciidamada Booliiska Soomaaliyeed oo sheegay in shaqaaqo Maanta ka dhacay Degmada Waabari...
Duqa Magaalada Muqdisho Tarsan oo sheegay inuusan daacad u ahayn madaxweynihii hore ee Sheekh Shariif ama Xasan Sheekh Maxamuud toona (Dhageyso)
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Maxamrrd Axmed Nuur Tarzan ayaa waxaa wareysi gaar ah la yeelatay BBC-da Laanta afka Soomaaliya, waxaana uu kaga hadlay arimo dhowr ah. Maxamuud Axmed Nuur Tarzan ayaa la weydiiyay Su’aal ahayd in uu Saaxiib dhow la ahaa Madaxweynihii Dowlada KMG Soomaaliya Mudane Shariif Sheekh Axmed, waxaana uu yiri sidan. “Aniga waajib bay igu tahay in madaxweyne kasta oo si doorasho...
Faah Faahin: Mid kamid ah dagaaladii ugu xooganaa oo Shabaab iyo dowlada ku dhexmaray duleedka Jowhar
Waxaa Saaka aroortii hore dagaal culus uu ka dhacay Deegaanka Qalimow oo ka tirsan Gobolka Shabeelaha Dhexe, kaasoo ay isku hariyeen Xoogaga Alshabaab iyo Ciidamada Dowlada iyo AMISOM oo dhinac ah. Sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya Qalimow Alshabaab ayaa Saaka aroortii hore fariisimo ay leeyihiin Ciidamada huwanta ku soo qaaday weerar xoogan , iyadoo Alshabaab ay dagaalka ku bilaabeen Qoryaha...